Esikhathini Izenzo St uLuka usitshela ukuthi abaningi ezilalelini akholelwe kuJesu Kristu lelo hora, lapho ntshumayelo yayifundwa ngu yakhe umphostoli uPawulu. Futhi omunye wabo kwaba Dionisiy Areopagit. Kodwa kungani le womlandi njengoba ngamnyama?
Dionisiy Areopagit ngaphambi ukwamukelwa kobuKristu
Uthi le nganekwane ukuthi lo muntu ube esikweyoku kuqala bese kuba iGrisi ophakeme. Areyophagu wayethethelela okuthiwa ngoba kwakungafaneleki Usihlalo ephakeme Athens - Mars Hill. Kusukela ezinsukwini umsunguli emikhandlwini zadluliselwa Solon ethatha isinqumo sokugcina amacala eziyinkimbinkimbi kakhulu avela kubo bonke republic yaseGrisi nezinqubomgomo, kanye kusukela emadolobheni amaningi Roman kanye nezifunda. Dionisiy Areopagit, njengoba besho, kwaba oyiqaphuqaphu kunazo zonke izikhulumi, umboni wemibono kunazo zonke izazi zezinkanyezi, isazi sefilosofi profound ukujabulisa kakhulu futhi truthful bonke abahluleli. Lokhu wayeyindoda benawo wonke izimfanelo. Nokusingatha umuntu odumile ezifana ebuKristwini isibe kwempahla ebalulekile nascent Church.
Ngemva ukwamukelwa of Christianity
Ngaphansi kobuholi Primate yeSonto Athens Ierofeya Dionisy wafunda kafushane ubuKristu futhi kwabonisa uzuza umxhwele ukuze Umphostoli UPawulu sezizonke kuye umbhishobhi esikhundleni sohlelo Hierotheos, owahamba Athens ukusakaza izwi likaKristu kwamanye amazwe. Ngokwemvelo, isonto Athens ngaphansi kobuholi umbhishobhi omusha waqala ukuthuthukisa ngokushesha. Nokho, kuyinto ngokoqobo ngonyaka amahlanu nesishiyagalombili ka- kusukela esikhathini sokuzalwa kukaKristu, Dionisiy Areopagit waya emzini waseJerusalema, eyayibonakala letigcogcwe kokuphefumulelwa kukaMoya oNgcwele, abaphostoli kanye nebangani bawo kusuka kuwo wonke amanye amazwe. Ngakho-ke, ukugcotshwa e-Athens kwakudingeka ahambe esegijima.
umsebenzi wezithunywa zevangeli
EJerusalema, inkulumo ephefumulelwe zabaPhostoli oNgcwele, umbono Assumption, emehlweni Calvary, nezinye izindawo zokukhulekela wenza noDiyonisiyu isipiliyoni nakho okukhulu kangangokuba kwangaphakathi, wanquma ukuba ahambe kulelo zwe unomphela kanye nomndeni wakho bese uya sishumayele ivangeli nasezindaweni ezingaphambi amazwe abezizwe. Wabuyela e-Athens kuphela ukuthatha abefundisi ambalwa. Ngaphezu kwalokho, indlela yakhe walala eNtshonalanga Yurophu, lapho yaqhakaza ukukhonza izithombe, yena balidumisa izwi likaJesu Kristu, nabo ngezibonakaliso, nangezimangaliso. Wakhanyisa ukukhanya iVangeli e-Italy, eSpain, eJalimane futhi eGaul, kuyilapho e-Paris, izingalo eziyikhulu namashumi ngonyaka weshumi kokuzalwa kukaKristu, hhayi wafa. I wesithathu Okthoba iSonto igubha inkumbulo lokhu ungumuntu odume wamaKristu okuqala, njengoba Saint Dionisiy Areopagit.
Umkhonyovu noma cha?
Ekupheleni kwekhulu lesihlanu eSiriya, omunye umlobi ayaziwa Christian ishicilele eziningi azibhala ngemibono yenkolo ngolimi lwesiGreki. Le misebenzi zazisekelwe inkulumo yeBhayibheli nefilosofi of neo-Platonism. Ngokuthakazelisayo, badedelwa ngaphansi kwegama nombhali "Dionisiy Areopagit". Ingabe lo lokukhohlisa? Kunzima ukusho ngokuqiniseka. Nokho, abacwaningi abaningi oyikholelwayo ukuthi lokhu kuseyindlela lokukhohlisa, futhi uthanda ukubiza nombhali indatshana ngokuthi "Pseudo-Dionisiy Areopagit."
Ezezindlu imisebenzi kuhlanganisa izincwadi ezinhlanu. Indatshana, nokusolakala ukuthi wabhala Dionisiy Areopagit, "On the Amagama KaNkulunkulu", iqukethe izimpikiswano ezingapheli nganoma izincazelo namagama zazo ezinikezwe eBhayibhelini ukuguqulwa ku Nkulunkulu ( "Good", "Enye", "NGINGUYE", "oMdala Wezinsuku," "iNkosi yamakhosi "). Umbhali uzama ukuchaza iphuzu zenkolo buka, okushiwo engcwele yamagama anjalo. Kwesinye indatshana, onesihloko esithi "Ngo emfundisweni ongaqondakali," ngokusho ukuphakama uNkulunkulu phezu kwawo wonke ngokuthi umuntu angazinqumela ukuyiveza ngamazwi. Ngakho-ke, uNkulunkulu ngenhla nobunye, nokuthi libonisa izingxabano zawo Dionisiy Areopagit. Ezinye yezinto ezithakazelisa kakhulu azibhala zenkolo isikhathi sakhe, futhi okwamanje - ". Imfundiso yenkolo ezingaqondakali" "Ngo Amagama KaNkulunkulu" futhi Dionisiy Areopagit - umbhali kabani izincwadi kungenziwa Uthwesé iqoqo yimuphi umuntu onesithakazelo iBhayibheli kanye nemfundiso yenkolo. Kukhona incwadi "On the Izigaba zabefundisi eSontweni," echaza ukuphila kwansuku of the Church - kwababusi abapristi (Diaconal, sabapristi futhi Episcopal), amasakramente (Ubhapathizo, Ukuqinisekiswa futhi uMthendeleko), umngcwabo nasemikhosini yomshado, penitents isimo futhi catechumens. Kodwa indatshana edume kunazo zonke, owabhala Dionisiy Areopagit - "Celestial Umkhakha". Kuwufanele ngifuna kabanzi.
Incwadi "Umkhakha Celestial"
Lo msebenzi uthatha indawo ezithakazelisayo kakhulu. Kulesi umsebenzi, kukhona ezinye ubufakazi kusukela iVangeli futhi Apocalypse kaJohane. Kuthiwa lo msebenzi ayilotshwanga ngaphambi ngasekuqaleni kwekhulu lokuqala ngemva kokufa kukaKristu, hhayi e-Athens, futhi emazweni entshonalanga. Incwadi ngokwayo wehlukaniswe tehluko nanhlanu. Okokuqala, ngaphambi kokuthi usitshele ngezimfihlakalo wasezulwini, Dionisiy Areopagit lokuqala uthandaza kuJehova ukuba amnike baqonde izimpawu umBhalo engcwele ethulwa ngaphansi lapho abona khona izingelosi kanye ezinhlwini zabo. Khona-ke kuchaza isidingo izinhlamvu ngokwabo lapha njengoba emikhosini engokwenkolo futhi oda eziyizingelosi, njengoba izingqondo zethu ayikwazi ukwenza noma iyiphi enye indlela ukungena la izimfihlakalo. Kodwa awukwazi ukuthatha lezi izimpawu ngokoqobo, njengoba emhlabeni yaphezulu - ehlukaniswe nemizimba. Phela, lo efanayo Dionisiy Areopagit uthi amagama laphezulu - kungcono zonke iziphakamiso abstract ufanekisela ukubonisa uJehova.
Umcabango kwabantu. Dionisiy Areopagit
"Umkhakha Celestial" - yezabasebenzi, okuyinto empeleni umsunguli Christian Science Angelology, kamuva bathuthela ngokusebenzelana nemimoya futhi "umlingo." Lokhu kuthambekela iye ukutadisha izingelosi, imisebenzi yabo, ezingeni futhi uxhumana nabo. Ngemva izibonelo ezingenhla futhi izincazelo ezinikezwe indatshana umqondo sabaphathi njengoba ubuhlobo ongcwele phakathi bezigaba ezingafani, okuhloswe ngalo ngisabone nokwenziwa phezulu (isb uMdali) ngokusebenzisa imfundo, ukuhlanzwa kanye ukuphelela ngokwabo futhi abangaphansi. Ngakho, sonke isigaba sabefundisi izingelosi (izithunywa) - iphiramidi phezu okuyinto iNkosi uqobo.
Eqinisweni, igama elithi "ingelosi" libhekisela emibhalweni umbhali, like Dionisiy Areopagit, kuphela phakathi kwababusi engezansi wamazulu, kodwa kusengenzeka ibe kuhlobene nezinga eliphakeme ngandlela-thile, njengoba nawo wonke amandla we ephansi. isigaba sabaphathi oNgcwele uhlukaniswe degrees ezintathu. Eyokuqala - kwamakherubi, uSeraphim futhi Thrones. In the yesibili - nokubusa, amandla negunya. Ngekhulu lesithathu - the eziyinhloko, iziNgelosi Qala. Sekukonke kukhona ezinhlwini ayisishiyagalolunye. Izici wokuqala (eliphakeme) ezingeni zibhekwa ngesisekelo amagama abo. Seraphims - ovutha amalangabi, amakherubi - ohlakaniphile, zobukhosi - ngokuqondile Lord sobukhosi (ezobizwa emva kwalokhu ngo isivuno nobumsulwa ukuphelela kuyo). Authority, amandla nokubusa (elandelayo amamaki) nazo kudalulwe ngenxa amagama abo. Wawuthi bona okuthuthukisiwe okhanyiselwe illuminations sa phansi kusuka ibencono, futhi udlulise phezu ephansi. Providence Waphezulu, yokuhamba komunye isithunywa kwenye ngokuhamba kwesikhathi buthakathaka. Ngiqala, iziNgelosi eziyinhloko njengoba induna izinhlangano zabantu kanye abantu kangcono. Khona-ke, umsebenzi wakhe Saint Dionisiy Areopagit uchaza futhi uchaza izimpawu ezisetshenziswa emBhalweni ukuchaza embusweni wezulu.
Isaladi okumnandi: Ungadliwa for ehlobo nasebusika